Izindawo zokuhlala e-Meghmala - I-Airbnb
Izindawo zokuhlala e-Meghmala
Rimbick, West Bengal, i-India
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Pragya
I-Rimbick, ehlala ethangeni le-Himalaya inikeza ukuzola ngokubuka. Noma ungumuntu ohamba ngezinyawo, eseqedile ukuya eSandakphu, noma ungumhambi ongenayo imikhondo, kodwa kunalokho ube yindlela yokuphila, sinendawo efanele wena.
Ngenxa yobhubhane, sibone ukwanda kwezivakashi ezifuna ijubane le-inthanethi. Ikhaya lethu linomxube ophelele wesivinini esihle kakhulu se-intanethi kanye nombono ozokwenza ukuhlala kwakho kube mnandi.
I-Meghmala Homestay itholakala kude neSingalila National Park endaweni evulekile. Izungezwe ukubukwa okuhle kweWest Sikkim nedolobha laseDarjeeling. Iqhelelene nezinxushunxushu nezixuku zaseDarjeeling (56 kms) kanye nokushisa okushisayo kweSiliguri (116 kms).
Uma ukhathele imigwaqo emincane emazombezombe yase-Darjeeling futhi ufuna ukuqhela edolobheni, i-Rimbick iyindawo ekahle yokubalekela ukusula ingqondo yakho futhi uvuselele umphefumulo wakho. Noma ngabe ufuna ukuqwala izintaba, ukukhempa, ukuhamba emahlathini noma ukumane uxhumane nemvelo, i-Rimbick ikunikeza izinketho ezahlukahlukene ongakhetha kuzo.
Indawo yokuhlala inamagumbi okulala amathathu. Amakamelo okulala akhiwe esitezi sesibili futhi anikeza indawo ethule engasese yemindeni nabangane yokuzijabulisa. Kukhona i-balcony ehlangene namagumbi okulala. Umuntu angakwazi ukuphumula lapha, usuku lonke.
Indawo yokuhlala itholakala kude nemakethe enkulu. Imigwaqo eya endaweni yokuhlala iyahamba futhi ifinyeleleka kalula.
Okukhanga kakhulu u-Rimbick owokuhamba ngezinyawo usuka e-Darjeeling noma uhambo oluseduze oluya epaki likazwelonke - ingesinye sezindawo zokuma ezinkulu emgwaqeni ohlanganisa nohambo oludumile oluya eSandpakphu. ISandakphu, iyindawo ephakeme kunazo zonke eNtshonalanga Bengal, futhi idume ngezivakashi njengoba inikeza umbono omuhle weMt Everest kanye neMt Khanchendzonga, ukhahlamba lwezintaba oluphakeme nelesithathu emhlabeni.
I-Rimbick inikeza imizila eminingi yokuhamba ngezinyawo ukuya ezindaweni eziseduze njengeManedara, i-Srikhola(indawo yomfula), i-Gurdum ne-Gorkhey-Samandin.
I-Rimbick futhi iyindawo efanelekile yokubuka izinkanyezi, ukuthwebula izithombe zasebusuku nokubuka izinyoni epaki likazwelonke eliseduze.
I-hamlet empeleni isendaweni yentaba ebheke uMfula iRamman ogeleza usuka eSikkim uye eBengal. Ingachazwa njengendawo yokugcina enkulu yokuhlala ngasohlangothini lwe-Bengal lomngcele. Itholakala eduze neNepal neSikkim.
Amakamelo athokomele, anamandla futhi anakekelwa kahle ukuze izivakashi zethu zifakwe izinto zesimanje ezifana namagiza.
I-balcony ibheke idolobha lonke lase-Darjeeling kanye ne-West Sikkim okwenza kube indawo ethokozisayo yokuthola obathandayo noma ukuzitika ngokufunda emakamelweni ethu, kuvulandi noma etafuleni lasekhishini.
Umakhelwane unokuthula njengoba unikeza indawo engavamile yesikole se-kergarden. Ungase uthole ubuso obumsulwa kakhulu buhlala endaweni yangakini ngesikhathi uhleli lapha.
I-Rimbick Upper Bazar futhi iyikhaya lesikhungo semina se-Buddhist kanye nenkundla enkulu yokudlala lapho izingane zingangena khona emidlalweni ezungezwe amapulazi lapho sikhulisa khona imifino, amazambane, upelepele neminye imifino yendawo. Isimo sezulu sase-Rimbick sincane ehlobo futhi siyabanda kuma-wineters.
Sikholelwa ekuhlonipheni indawo nobumfihlo bamakhasimende ethu ukuze ababungazi bazotholakala uma futhi uma ubashayela ucingo.
Ungaxhumana nami ngocingo noma nge-imeyili. Singakunikeza nesiqondiso sendawo uma kwenzeka usidinga.